I-Irish Surnames: Amagama aqhelekileyo okugqibela e-Ireland kunye neentsingiselo
Iinguqu zegama lesi-Irish kunye neendawo zokuqala
I-Ireland yayingomnye wamazwe okuqala ukufumana amagama okuzalwa, amaninzi awo ayenziwe ngexesha lolawulo lukaBrian Boru, uKumkani ophezulu wase-Ireland, owawa emela iIreland ukusuka kwiVikings kwi-Battle of Clontarf ngo-1014 AD. Amaninzi ala magama aqalayo aseIreland aqala njengendlela yokuchaza unyana evela kubaba okanye umzukulu wakhe kumkhulu wakhe. Yingakho kuyinto eqhelekileyo ukubona iziqendu eziqhotyoshelweyo kwiizina ezi-Irish.
I-Mac, ngamanye amaxesha ibhalwe nguMic, igama elithi Gaelic elithi "unyana" kwaye linamathele egameni likayise okanye urhwebo. O lizwi lonke ngokwalo, elibonisa "umzukulu" xa unamathele egameni lomkhulu okanye umninimkhulu. I-apostrophe edla ngokulandela i-O ivela ngokungaqondakali ngamabhalana akhuluma isiNgesi ku-Elizabethan ixesha, owaluguqulela njengendlela yegama elithi "." Esinye isiqalo esiqhelekileyo saseIreland, uFritz, esivela kwigama lesiFrentshi elithi fils, elithetha "unyana."
50 Iimpawu eziqhelekileyo zesi-Irish
Ngaba intsapho yakho ithwala elinye lala ma-50 amagama aqhelekileyo aseIreland?
Le ntsapho yase-Ireland yayisasazeke kakhulu, ihlala eFermanagh, eGalway, Kerry, Kilkenny, naseWestmeath. Inqampu yeBrennan e-Ireland ngoku ifunyenwe kakhulu kwiCommunity Sligo kunye nephondo leLeinster.
Brown okanye Browne
Ngokuqhelekileyo kwi-England ne-Ireland, iintsapho zase-Irish Brown zifumaneka kwiPhondo laseConnacht (ngokuthe ngqo iGalway neMayo), kwakunye noKerry.
O O Boyles babeyizikhulu eDonegal, elawula ngasentshonalanga Ulster kunye ne-O Donnells kunye ne-O Doughertys. Inzala kaBoyle inokufumaneka kwiLildare nase-Offaly.
Igama likaNorman ekugqibeleni uBurke lavela kummandla waseCaen eNormandy (de burg lithetha "kwidolophu.") IiBurke ziye zahlala e-Ireland ukususela ngekhulu le-12, zihlala kwiPhondo laseConnacht.
Intsapho ye-O Byrne (Ó Broin) yavela eKildare de ifike i-Anglo-Normans kwaye yaqhutyelwa e-ntshona kwiintaba zeWicklow. Igama le-Byrne lisaqhelekile kwiWicklow, kunye neDublin kunye neLouth.
I-Callaghans yayinentsapho enamandla kwiphondo laseMunster. Abantu ngabanye ngeenjama zase - Irish Callaghan baninzi kwiClare naseKork.
Iintsapho zaseCampbell zixhaphake kakhulu kwiDonegal (ezininzi zivela kumajoni aseScotland), kunye neCavan. UCampbell uchaza igama elithi "umlomo okhohlakeleyo."
Inombolo yeCarroll (kunye neendidi ezifana ne-O'Carroll) zifumaneka kwi-Ireland, kuquka i-Armagh, i-Down, iFermanagh, iKerry, i-Kilkenny, i-Leitrim, iLouth, i-Monaghan kunye ne-Offaly. Kukho kwakhona intsapho ye-MacCarroll (i-Anglized MacCarvill) evela kwiphondo lase-Ulster.
Enye yegama elidala kunazo zonke e-Ireland, i-O Clery ifani (i-anglicized to Clarke ) ininzi kakhulu kwiCavan.
Isibongo esiqhelekileyo sase-Irish Collins esivela eLimerick, nangona emva kokuhlasela kukaNorman babalekele eKork. Kukho neentsapho zaseCollin ezivela kwiphondo lase Ulster, ininzi zazo mhlawumbi ziNgesi.
Iintlobo ezintathu ezihlukeneyo ze-O Connell, ezisemaphandleni aseConnacht, Ulster naseMunster, zivela kwiintsapho ezininzi zeConnell eClare, eGalway, eKerry.
Ekuqaleni kwintsapho yase-Ireland esuka eGalway, iintsapho zeConnolly zahlala eCork, Meath, naseMonaghan.
Ngesi-Irish Ó Conchobhair okanye u-Ó Conchúir, igama likaConnor igama lokugqibela lithetha "iqhawe okanye iqhawe." I-O Connors yayinye yeentsapho ezintathu zaseburhulumenteni zase-Irish; Bavela kuClare, uDerry, Galway, Kerry, Offaly, Roscommon, Sligo kunye nephondo lase Ulster.
I-Irish Ó Dálaigh ivela kwi-dáil, echaza indawo yendibano. Abantu ngabanye abanesibongo se- Daly sichotho ngokusuka kwiClare, eKork, eGalway naseWestmeath.
Igama kwi-Irish (Ó Dochartaigh) lithetha ukuphazamiseka okanye ukulimaza. Ngekhulu le-4 i-Dohertys yahlala malunga ne-Inishowen peninsula eDonegal, apho bahlala khona ngokuyinhloko. Inqatyana ye-Doherty yinto eqhelekileyo kwiDerry.
Igama elithi Doyle ligama elivela kwi- dubh , " umfokazi ongumntu ," kwaye kucatshangelwa ukuba yiNorse.
Kwiphondo lase Ulster baziwa ngokuba yi-Mac Dubghaill (MacDowell kunye neMacDuggall). I-Doyles enkulu kakhulu kwi-Leinster, Roscommon, Wexford kunye neWicklow.
Ó Dubhthaigh, echazwe kwiDuffy, ivela kwigama lesi-Irish elithetha lumnyama okanye lugwebe. Ilizwe labo langaphambili lalinguMonaghan, apho igama labo lisaqhelekileyo; nazo zivela kwiDonegal naseRosscommon.
Ukusuka kwiIreland kumdaka (i-dot), igama lokuqala lesi-Irish elithi Ó Duinn liye lalahlekelwa ngumhlathi wokuqala; kwiphondo lase-Ulster yokugqibela e ishiyiwe. UDunne yiyona nkcukacha eqhelekileyo eLoisis, apho usapho lwavela khona.
Oo-O Farrell iinkosana zase-Annaly kufuphi naseLouford naseWestmeath. UFarrell uyineniso ngokuqhelekileyo ithetha "umkhosi onamandla."
Intsapho yaseNorman eya e-Ireland ngo-1170, i-Fitzgeralds (i-spelled Mac Gearailt kwiindawo zase-Ireland) yayithatha indawo enkulu kwiCork, Kerry, Kildare, naseLimerick. Inqampu yeFitzgerald iguqulela ngqo "njengonyana kaGerald."
Isibongo saseIreland Ó Floinn sixhaphake kakhulu kwiphondo lase Ulster, nangona kunjalo, i-"F" ayifakwanga kwaye igama ngoku nguLowinn okanye uLynn. Inqama yeFlynn inokufumaneka kwiClare, Cork, Kerry, naseRosscommon.
Inzala yaseGallagher iye yahlala kwiCommunity Donegal ukususela ngekhulu le-4 kunye neGallagher yiyona nkcukacha eqhelekileyo kule ndawo.
Iphepha elilandelayo > I- Common Irish Surnames HZ
<< Buyela kwiPhepha lokuqala
Isiqongo se-Healy sisoloko sifumaneka kwiKork and Sligo.
Inqampu yeHughes, kokubili isiWelshi kunye ne-Irish kwimvelaphi, ininzi kakhulu kumaphondo amathathu: iConnacht, iLeinster kunye ne-Ulster.
UJohnston ligama eliqhelekileyo kwisifunda sase-Ireland sase Ulster.
Iintsapho zeKelly ezivela kwimvelaphi yase-Ireland zivela ngokuyinhloko ukusuka kuDerry, eGalway, Kildare, Leitrim, Leix, Meath, Offal, Roscommon kunye neWicklow.
Isibongo saKennedy, isiqalo sase-Ireland nesiScotland, sisuka eClare, Kilkenny, Tipperary naseTexford.
Iintsapho zaseLynch (Ó Loingsigh e-Irish) zaza zahlala eClare, Donegal, eLimerick, eSligo naseWestmeath, apho igama leLynch liqhelekileyo.
Iqonga leMacCarthy livela ngokuyinhloko kwiCork, Kerry naseTipperary.
Igama leMaguire liqhelekileyo kwiFermanagh.
I-Munster yayiyintsimi yendlu kaMahoney, kunye nama-Mahon ayeninzi kakhulu kwiCork.
Igama leMartin, eliqhelekileyo kwiNgilani nase-Ireland, lingafumaneka ngokuyinhloko eGalway, eTyrone naseWestmeath.
Ama-Moores amandulo ase-Kildare ahlala eKildare, ngelixa ininzi iMoores ivela e-Antrim naseDublin.
Eyona nto iqhelekileyo kuwo onke amagama ase-Irland, igama le-Murphy lingafumaneka kumaphondo amane. I-Murphys ngokuyinhloko ivela kwi-Antrim, i-Armagh, i-Carlow, iCork, i-Kerry, i-Roscommon, i-Sligo, iTyrone ne-Wexford, nangona kunjalo.
Igama le-Murray lincinane kakhulu kwiDonegal.
Iintsapho zaseNolan zihlala zizininzi kwiCarllow, kwaye zifumaneka kwiFermanagh, e Longford, eMayo naseRosscommon.
Enye yeentsapho ezikhokelayo zaseIreland, u-Briens ngokuyinhloko uvela eClare, eLimerick, eTipperary naseManziford.
Ii-O Donnell ezizweni zahlala zihlala eClare naseGalway, kodwa namhlanje zininzi kwi-County Donegal.
Enye yeendwendwe ezintathu zaseburhulumenteni zase-Ireland, i-O Neills ivela kwi-Antrim, i-Armagh, i-Carlow, iClare, iCork, i-Down, iTipperary, i-Tyrone ne-Waterford.
Ukususela kuCeann, igama lesi-Irish ngentloko, igama elithi, Ó Cuinn, lithetha ukuqonda. Ngokuqhelekileyo, amaKatolika ayichaza igama ngeenkunzi ezimbini xa amaProthestani ayipela enye. I-Quinns ngokuyinhloko ivela e-Antrim, eClare, e-Longford naseTyrone, apho igama labo liqhelekileyo.
Iintsapho ze-Conor ookumkani baseConnacht, iiReillys zivela kwiCavan, Cork, e-Longford naseMeath.
Imindeni yase-Ó Riain kunye neRyan yase-Ireland ngokuyinhloko ivela eCarllow naseTipperary, apho uRyan ebizwa khona ngegama. Zingafumaneka kwakhona kwiLimerick.
Ekuqaleni intsapho yaseShea yayivela kuKerry, nangona kamva yaxhuma ukuya eTipperary ngekhulu le-12 neKalkenny ngekhulu le-15 leminyaka.
AbakwaSmith, bobabini isiNgesi nesi-Irish, ngokuyinhloko bavela e-Antrim, eCavan, Donegal, Leitrim, naseSligo. U-Smith ngokwenene ungumnxeba oqhelekileyo ku-Antrim.
Ekuhlaleni ku-County Tipperary, intsapho yaseSullivan isasazeka kwiKerry naseKork, apho bahlala baninzi kakhulu kwaye igama labo liqhelekileyo.
Iintsapho ze-Sweeney zitholakala ngokuyinhloko kwiCork, Donegal naseKerry.
Leli gama lesiNgesi liyesibini igama eliqhelekileyo elingelona elingu-Irish elitholakala e-Ireland, ngakumbi e-Ulster. Inqampu yeT Thomson, ngaphandle kwe "p" yiScotland kwaye iyona exhaphakileyo kwi-Down.
Igama liye lasetyenziswa ekuchazeni abantu base-Welsh abafika e-Ireland ngexesha lokuhlasela kwe-Anglo-Norman, iintsapho zaseWalsh zazininzi kwiiphondo ezine zase-Ireland. UWalsh yiyona nkcukacha eqhelekileyo eMayo.
I-Spell de Faoite okanye i-Mac Faoitigh e-Ireland, eli gama liqhelekileyo lisuka kwi-"le Whytes" eya e-Ireland kunye nama-Anglo-Normans. Imindeni e-White ingabakho e-Ireland kwi-Down, i-Limerick, i-Sligo kunye ne-Wexford.
Kutheni amanye amaPagan amaVaggetari?
Wayenjani uJulius Caesar kunye noMlandeli wakhe, uAgasto, ehlobene?